इटहरीबाटै अष्ट्रेलियाको कलेजमा भर्ना, स्पोर्टमै भर्नाका लागि चिठ्ठी दिने सेमिनार आइतवार इटहरीमा
प्रकाशित मितिः पुष २०, २०७५
इटहरी । इडन एकेडेमी कन्सल्टेन्सी प्रा.ली. इटहरीले पुष २२ गते आईतबार फ्रि सेमिनार गर्दैछ । यो फ्री सेमिनार अष्ट्रेलियामा पढन जान चाहाने विद्यार्थीहरुका लागि केन्द्रित छ । सेमनिार,सेमिनारबाट बिद्यार्थीले पाउने सुबिधा र फाइदाको बिषयमा सञ्चारपाटीले इडन एकेडेमी कन्सल्टेन्सी प्रा.ली. इटहरीका कार्यकारी निर्देशक सुमन काप्mलेसँग गरेको कुराकानी :
इडनले गर्न लागेको सेमिनार कस्तो सेमिनार हो ?
यो सेमिनार अष्टेलियाको प्रतिष्ठीत कलेज र विश्व विद्यालयहरुको प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहने भएकोले यो अष्ट्रेलिया पढन जान चाहाने विद्यार्थीहरुकोलागि सुर्वण अवसर हो । यो सेमिनार इटहरीमा पुस २२ गते आईतवार हुदैछ । धरानमा भने शनिबार हुँदैछ । धरान र इटहरीका विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियामा पढन जाँदा चाहिने अत्यावश्यक जानकारी र उनीहरुले भविष्यमा प्राप्त गर्न सक्ने अवसरहरुका बारेमा भरपुर जानकारी पाउनेछन् । यसैगरी यसपटक विद्यार्थीहरुको सहुलियतका लागि बैकिंङ बुथ पनि राखिने छ । जहाँ विद्यार्थीहरुले झेल्नुपर्ने अर्थिक समस्या र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पुर्ण जानकारी विद्यार्थीहरुले पाउनेछन् ।
यो सेमिनार कस्ता विद्यार्थीहरुका लागि हो ?
यो सेमिनारले प्लस टु पढि सकेका विद्यार्थीहरु व्याचलर्स पढन र व्याचलर्स पढीसकेकालाई मास्र्टस पढन र मास्र्टस पढीसकेकालाई रिसर्च अर्थात विद्यावारीधि गर्नेहरुलाई लक्षित गरेको छ । समग्रमा हामीसँग प्लस टु देखि पिएचडी सम्म पढने विषय वस्तु भएका कलेज र विश्व विद्यालयहरुको सहभागिता हुनेछ । यस कारण धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु लाभान्वीत हुनेछन् ।
स्पोर्ट एडमिसनको व्यावस्था छ की छैन ? सेमिनारमा ?
केही विश्व विद्यालय र कलेजहरुले विद्यार्थीहरुको कागजात हेरेर स्र्पोट एडमिसनका लागि स्र्पाेट अफर लेटर दिने व्यावस्था छ ।
यस्तो फ्री सेमिनर अरु तिर गर्ने योजना छ की छैन ?
पहिलो पटक धरान र इटहरीमा गर्न लागिएको हो भने अव चाँडै नै विराटनगर र विर्तामोडमा पनि गर्ने योजना रहेको छ ।